सेलिब्रेटी भ्यु: नेपालको पक्षमा बोल्ने मनिषालाई साथ दिदै क-कस्ले के भने ? (भिडियो सहित) – Complete Nepali News Portal
बिहिबार, ०२ बैसाख २०७८
सेलिब्रेटी भ्यु: नेपालको पक्षमा बोल्ने मनिषालाई साथ दिदै क-कस्ले के भने ? (भिडियो सहित)
ScotNepal May 23, 2020
ईटहरी/ यतिबेला विश्व सहित नेपाल पनि लकडाउनमा छ । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस कोभिड १९ ले लाखौ को ज्यान लिई सकेको छ भने नेपालमा पनि पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । यता यो महामारीको बिचमा नेपालमा अर्को गहन बिषयले पनि ठुलै स्थान पाएको छ । बर्षौ देखि वादबिवाद हुँदै आएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बिषय अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । जुन कुरालाई नेपालको पक्षमा बोल्दै नेपाली कलाकारहरुले यस्तो भनेका छन् ।
नेपाल सरकारले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नया राजनैतिक नक्सा सार्बजनिक गरेपछी यो बिषयले चर्चा पाएको हो । जसको नेपालमा स्वागत भैरहदा छिमेकी राष्ट्र भारतमा भने तरंग पैदा भएको छ । यता नेपाली मुलकी भारतिय चर्चित नायिका मनिषा कोईरालाले नेपालको पक्षमा लेख्दै ट्विट गरेपछी त भारतियहरुको मुटु कामेको बुझ्न सकिन्छ । मनिषाको सो ट्विटलाई लिएर भारतिय मिडियाहरुले खेदो खनिरहेका छन भने नेपालमा भने उनलाई समर्थन गर्नेहरुको ताती लागेको छ । विशेष गरि नेपाली चर्चित कलाकारहरुले देशभक्ति भावना प्रकट गर्दै मनिषालाई समर्थन गरेका छन । भिडियोमा हेर्नुस् ।
जननी र जन्मभूमि एउटै हुन्। जुनसुकै
नया वर्ष २०७८ को अवसरमा राजधानीको
झापामा घिमिरेले कुटेर दलितको ह,,त्या गरे
वेब सिरिज ‘ईओजी (Errors of God)’
सिएनएस युकेले बेलायतमा नेपाली समुदायमा कोभिड
झापामा शान्तिका प्रतीक जोडि परेवा उडाएर
सुन्दै ड,र लाग्दो घटना घट्यो, गाउमा
वेब सिरिज ‘ईओजी (Errors of God)’ को फर्स्टलुक सार्बजनिक
लोकप्रिय सर्जक किरण बाबु पुनको सृजनामा नर बहादुर सिंहको ‘पिपलु...
गायिका निशा केसीले ल्याईन बसन्त थापा संग नया मौलिक गीत
रमेश प्रसाईको श्रीमती बच्चाको आमा बन्दै,पुगिन अन्जु पन्त र उनको...
अलिफ खान जन्म दिनमा रुदै आए मिडियामा,दिदि पनि रोइन, अलिफलाइ...
चर्चित नृत्य निर्देशक शिव बिकको स्वरमा ‘तिमि नभए’ सार्बजनिक (भिडियो...